Vaovao momba ny iPhone | IPhone News (Pejy 10)
Manakaiky ny mpanjifa mandoa vola 100 tapitrisa Spotify
Spotify dia nandinika ny angon-drakitra ara-bola azo tao anatin'ny efa-bolana farany tamin'ny 2018, izay nanambara ny fahatongavany ho an'ireo mpampiasa karama 96 tapitrisa.
Ny fampahalalana anatiny vaovao nampiana tao amin'ny Apple Maps ho an'ny seranam-piaramanidina, toeram-pivarotana ary fitateram-bahoaka
Apple dia mampiditra vaovao anatiny ao amin'ny Apple Maps ho an'ny seranam-piaramanidina, toeram-pivarotana ary fitateram-bahoaka any amin'ny tanàna maro
Ireto ny sasany amin'ireo fepetra apetrak'i Apple hiarovana mangingina ny fampandrosoana ny tetikasany
Noho ny fitarainana napetraky ny FBI tamin'ny mpiasa Apple iray voampanga ho nangalatra ny tsiambaratelon'ny varotra, fantatray ny sasany amin'ireo fepetra fiarovana nataon'i Apple mba hisorohana ny fivoahan'ny rano.
Ireo no tranga vaovao natombok'i Tesla ho an'ny iPhone amin'ny Amazon
Tesla dia namoaka karazana tranga iPhone vaovao izay hamidy mivantana any Amazon ho an'izay te-hihazona azy ireo.
Amin'ity herinandro ity ao amin'ny podcast anay dia miresaka momba ny iOS 13 izahay, ireo vokatra vaovao ho tonga amin'ity taona ity sy ny adihevitra eo amin'ny Apple, Facebook ary Google
Angela Ahrendts handao an'i Apple amin'ny volana aprily
Angela Ahrendts, handao an'i Apple amin'ny volana aprily ary hanatrika fanamby hafa. Deirdre O'Brien dia mijanona eo amin'ny toerany amin'ny maha mpitantana fivarotana azy.
Ireo no Animoji vaovao an'ny iOS 12.2 betas
Apple dia nanampy Animoji vaovao efatra tao amin'ny beta faharoa an'ny iOS 12.2, nanampy ny mihoatra ny 20 izay efa misy ao amin'ny iOS 12.1
Manomboka mivarotra adaptatera Ethernet amin'ny Lighning i Apple
Apple dia nanomboka nivarotra adaptatera ahafahanao mampifandray tariby Ethernet sy Lightning amin'ny fotoana iray hitaky vola sy hanome fifandraisana amin'ny tamba-jotra.
Azonao atao izao ny mividy ny iPhone X mora indrindra ao amin'ny faritra nohavaozin'i Apple
Ny iPhone X dia mbola vokatra tadiavina noho ireo zava-baovao vitsivitsy amin'ny lafiny famolavolana sy ny fitaovana amin'ny ankapobeny ...
Apple dia manaparitaka sensor etona misy tontolo iainana sy misy poizina ho an'ny iPhone sy fitaovana hafa
Ny patanty iray nosoratan'i Apple dia manome sosokevitra fa ny orinasa dia mety miasa amin'ny sensor izay mahita gazy misy poizina eo amin'ny tontolo iainana.
Bill Stasior, nandao an'i Apple taorian'ny 7 taona teo an-tampon'ny ekipa Siri
Ny fialan'ny mpitantana Siri Bill Stasior nandritra ny fito taona lasa dia nametraka an'i Jhn Giannandrea ho lohalaharana amin'ny fampandrosoana ny mpanampy
Niala tsiny i Apple noho ny tsy fahombiazan'ny FaceTime ary nanambara izy fa amin'ity herinandro ity dia hanavao ny serivisy izy io
Ny orinasa dia nanolotra fialantsiny ho an'ny fianakaviana nahatsikaritra ny olan'ny FaceTime sy ho an'ireo mpampiasa rehetra tratry ny bibikely.
Ny mpampiasa iOS 11 sasany dia manana olana amin'ny App Store
Ny mpampiasa iOS 11 sasany dia miaina olana amin'ny fidirana amin'ny serivisy Apple toy ny iOS App Store ary mazava ho azy Apple Music.
Ny vondrona FaceTime dia hijanona ho kilema ao amin'ny iOS 12.1.3 sy aloha kokoa
Apple dia miomana amin'ny famoahana ny iOS 12.1.4 mba hamahana ireo olan'ny fiarovana ny vondrona FaceTime, amin'ny kinova taloha dia ho foana hatrany izany.
Ity fotokevitra ity dia mampiseho amintsika ny mety ho taranaka faha-7 amin'ny iPod Touch
Ireo tondra-drano dia manolo-kevitra fa ho hitantsika tsy ho ela ny andiany faha-7 an'ny iPod Touch miaraka amin'ny efijery mitovy amin'ny iPhone ankehitriny ary tsy misy Face ID.
John Gruber dia nilaza fa amidy lafo ny Apple TV 4K ary tsy manome vola an'i Apple ny HomePod
Mazava ny tenin'ny mpanao gazety manokana ao Apple ary manazava izy fa ny Apple TV sy ny HomePod dia tsy manome vola an'i Apple
Manavao ny rindranasa ve ianao ary miseho indray izy ireo hanavao? Tsy ianao irery
Ny olana iray amin'ny fanavaozana ny rindranasa sasany dia misy fiatraikany amin'ireo mpampiasa maro izay manandrana manavao azy ireo ary miseho foana izy ireo nefa tsy manavao
Apple dia mivarotra iPad 14,5 tapitrisa amin'ny Krismasy, mbola velona be
Apple dia tokony nivarotra XNUMX tapitrisa eo ho eo ny iPad nandritra ny telovolana farany tamin'ny taona, izay misy ny vanim-potoanan'ny Krismasy.
Mpiasa Apple Apple Voasambotra Noho Ny Fangalarany Tsiambaratelo momba ny varotra mifandraika amin'ny tetikasa Titan
Nosamborin'ny FBI ny teratany sinoa iray izay niasa tao Apple taorian'ny fiampangana azy ho nangalatra tsiambaratelo momba ny varotra mifandraika amin'ny rafitra fiara mitokana.
Ny fifanolanana maharitra: Apple dia mila chips chips Qualcomm, saingy tsy namidy izy ireo
Ny lehiben'ny mpiasan'ny Apple, Jeff Williams, dia nanazava ny amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny Qualcomm: tsy te hivarotra chip ho azy ireo izy ireo amin'ny 2018
Apple dia nandefa iPhone efa ho 66 tapitrisa tamin'ny telovolana Krismasy
Manomboka manao kajy voalohany ireo mpandalina ary mazava izy ireo fa tokony ho nandefa iPhones 66 tapitrisa i Apple tamin'ny Krismasy.
Samsung dia manamboatra betsaka ny fahatsiarovana 1TB, ho an'ny iPhone?
Samsung dia manomana ny famokarana betsaka ny fahatsiarovana 1TB ho an'ny terminal finday, hahatratra ny iPhone sy ny iPad ve izany?
Tim Cook dia miresaka momba ny vidin'ny iPhones: "Mihevitra aho fa anton-javatra io"
Ny CEO Apple Apple Tim Cook dia mino fa ny vidin'ny iPhone dia manan-danja amin'ny tsena misongadina izay misy fiatraikany lehibe amin'ny vidiny.
Jaybird dia mandefa ny Run XT ho an'ny headphone True Wireless maranitra vaovao
Andao hojerentsika ireo headphone misy kalitao natao ho an'ny atleta, ny Jaybird RUN XT izay True Wireless ihany koa.
Corning dia mampitombo tombony na dia eo aza ny fivarotana iPhone ambany
Na eo aza ny fihenan'ny fivarotana iPhone erak'izao tontolo izao, ny mpivarotra Corning dia nampitombo ny tombom-barotra azony tao anatin'ny herintaona.
Apple dia manomboka ny taona 2019 amin'ny tongotra diso, ny fanovàna voalohany ny fidiram-bolany ary ankehitriny ny lesoka fiarovana lehibe amin'ny FaceTime
Apple dia namoaka ny "Boriboritany feno", ny doka vaovaony voarakitra miaraka amin'ny 32 iPhone XR
"Boriboritany feno" no doka vaovao nataon'i Apple eo ambanin'ny andiany "Shot on iPhone XR". Voarakitra miaraka amin'ny iPhone XR 32 miaraka.
Xenowerk dia lalao hetsika tsara handaniana ny fotoana
Manolotra anao Xenowerk aho, hetsika zenith ary tifitra be dia be hamonjy an'izao tontolo izao.
Ny iPad Mini 5 vaovao dia hifanaraka amin'ny Apple Pencil sy ny Smart Keyboard
Araka ny fivoahana farany farany, ny iPad Mini 5 vaovao dia hifanaraka amin'ny Apple Pencil sy ny Smart Keyboard, iPad Pro Mini?
Apple dia afaka namela famandrihana handefa serivisy an-tserasera amin'ny alàlan'ny fampiharana TV
Ny tovolahy avy any Cupertino dia te-hanolotra anay handoa ny serivisy vidéo streaming an'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny Apple TV sy amin'ny app TV.
Ny mpandraharaha dia efa nahazo $ 120.000 miliara amin'ny App Store
Araka ny filazan'ny orinasa Cupertino, ny mpandraharaha dia efa nahazo $ 120.000 miliara mahery tamin'ny alàlan'ny iOS App Store.
Ny glitch FaceTime matotra dia mamela anao ho re fa tsy manaiky ny antso
Toa handositra ny iOS 12 nefa tsy nisy lesoka fiarovana lehibe, saingy tsy nanohitra ary ...
Apple dia nitory indray noho ny fanitsakitsahana ny patanty roa mifandraika amin'ny Bluetooth
Hitan'ny tovolahy Cupertino fa nahatratra ny biraon'ny orinasa ny fitoriana vaovao momba ny fanitsakitsahana ny patanty.
Ny vaovao rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 12.2
Mijanona aminay ary jereo miaraka amin'ity torolàlana azo antoka ity izay vaovao rehetra tonga tao amin'ny iOS 12.2 mba hahafahanao manapa-kevitra raha hanavao.
Apple dia nanamboatra rafitra fiarovana ka tsy hanelingelina ny fitaovana magnetika hafa ny AirPower
Ny lehilahy Cupertino dia tokony namorona rafitra fiarovana ho an'ny AirPower vaovao izay manakana azy tsy hanelingelina ireo fitaovana andriamby hafa.
Ny iPad manaraka dia mety tsy manana Face ID
Ny iPad sy iPad Mini vaovao an'ny paoma lehibe dia tsy hanana Face ID fa Touch ID, araka ny kaody hita tao amin'ny beta an'ny iOS 12.2.
Strategy Analytics dia mampiseho data momba ny isan'ny iPhone amidy any Shina
Noho ny tatitra navoakan'ny Strategy Analytics dia hitantsika fa kely kokoa ny fivarotan'i Apple ny iPhone tamin'ny taona 2018 Sina raha ampitahaina amin'ny angona 2017.
Apple dia mampiroborobo ny Apple Pay Cash na eo aza ny fanitarana miadana
Ny orinasa Cupertino dia nanao fampielezan-kevitra hampiroborobo ny Apple Pay Cash amin'ny fanitarana tanteraka.
Ny patanty vaovao ho an'ny iPod Touch dia mifandraika amin'ny fitaovana filalaovana
Ny fisoratana anarana vaovao momba ny patanty hitehirizana ny anarana iPod Touch dia hita ao amin'ny Office Patent United States nosoratan'i Apple
Apple dia mandefa ny Beta voalohany an'ny iOS 12.2 ary watchOS 5.2
Apple dia manomboka ny fihodinana beta indray miaraka amin'ireo kinova vaovao iOS 12.2 sy watchOS 5.2, miaraka amin'ny tvOS 12.2 sy macOS 10.14.4
Ny praiminisitra Egypt dia maniry ny hiorenan'ny Apple ao amin'ny firenena ary hiara-hiasa amin'ny fanavaozana ny fanabeazana
Raha ny filazan'ny praiminisitra Egypt dia afaka mandray anjara lehibe amin'ny fanavaozana ny fanabeazana ny firenena i Apple.
Mamporisika antsika i Apple mba haka sary amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fandefasana fifaninanana sary
Ny fahagagana an'i Apple amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fifaninanana voalohany miaraka amin'ny sarinay dia azo safidiana amin'ny fampielezana Shot amin'ny iPhone.
Apple dia tonga tany amin'ny toeram-ponenana manokana niaraka tamin'ny orinasa izay niampanga azy ho nangalatra ny haitao ho an'ny Apple Watch
Toa nanondro ny zava-drehetra fa nahemotra ny fitoriana teo amin'i Apple sy Valencell rehefa nahavita fifanarahana manokana teo amin'ny roa tonta.
Apple dia mijanona ho orinasa ankamamiana indrindra amin'ny taona faharoa ambin'ny folo
Nandritra ny taona faharoa ambin'ny folo nisesy, ny orinasa sarobidy indrindra dia i Apple indray araka ny fanontana Fortune taorian'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny mpitantana 3700 mahery
Ireo orinasa dia manohy miantehitra amin'ny iPhone ho vokatra amin'ny taona 2019
Amin'ny taona 2019, ny antsasaky ny talen'ny orinasa lehibe dia mbola hiantehitra amin'ny fitaovana iOS hanome azy ireo ho an'ny mpiasan'izy ireo.
Ny fanombohana ny Smart Battery Case ho an'ny iPhone, ny fisehoan'ny iPhone SE ary vaovao maro hafa ao amin'ny podcast isan-kerinandro
Belkin Updates Wemo Light mifamadika amin'ny HomeKit Bracket
Ireo tovolahy ao Belkin dia manohy ny fikarohana automatique an-trano ary handefa ny switch Wemo vaovao mifanaraka amin'ny HomeKit amin'ny lohataona ho avy.
Japana dia mandinika ny fampiharana ny lalàna "tsiambaratelo momba ny fifandraisana" amin'ireo orinasa teknolojia vahiny
Te-hanitatra ireo lalàna miantraika amin'ny fitantanana ny angon-drakitry ny olom-pirenena amin'ireo orinasa vahiny miasa ao amin'ny firenena i Japon.
Samsung dia tsy mampihena ny vidiny, ny Galaxy S10 dia mileuristas
Raha ny fivoahana farany farany, ny Samsung Galaxy S10 dia lafo maherin'ny 900 euro amin'ny maodely fidirana ary hahatratra 1.600 amin'ny maodely ambony.
Amidy amin'ny ora vitsivitsy monja ny tahiry manontolo an'ny iPhone SE
Apple dia nandany tanteraka ny tahirin'ny iPhone SE izay natombony niaraka tamin'ny fihenam-bidy mahaliana na dia teo aza ny resabe nateraka.
Ireo mpiasan'ny Apple mavitrika indrindra dia hahazo fehy Watch
Apple dia nanapa-kevitra ny hanome tady manokana ho an'ny Apple Watch amin'ireo mpiasa mavitrika indrindra amin'ity volana ity.
Herintaona indray dia manome voninahitra an'i Martin Luther King ny tranokala Apple
Herintaona indray, ny tranonkala Apple dia manome voninahitra an'i Martin Luther King, iray amin'ireo maherifo manokana an'i Tim Cook, lehiben'ny mpanatanteraka ao Apple.
WhatsApp dia hametra ny hafatra mandroso amin'ny resaka 5
Ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra malaza WhatsApp dia manomboka mandrara ny fandefasana hafatra mihoatra ny 5 eo amin'ireo mpampiasa mba hialana amin'ny vaovao sandoka
Spotify dia hamela anao hanakana mpanakanto amin'ny famoahana amin'ny ho avy
Miaraka amin'ny serivisy streaming mozika sy ny tolo-kevitr'izy ireo, misy ihany koa ny lafiny ratsy. Henoy ireo mpanakanto izay ...
Fakan-tsary selfie vaovao sy fanovana isan-karazany amin'ny iPhone XI
Ny iPhone XI dia hanana fakantsary Selfie tsy latsaky ny 10 MP ary hahazo vaovao ihany koa amin'ny famolavolana ny motherboard.
Google Maps dia nandresy tamin'ny farany ny fetra hafainganam-pandeha sy ny fampitandremana fakan-tsary haingana
Ankehitriny Google Maps dia mampifandray ny fampitandremana ny fetran'ny hafainganana ary koa ny radara hanatsarana ny fiarovana ny mpampiasa azy.
Musish, kinova tsy ofisialy hankafizanao ny mozika Apple Music
Apple dia tsy manana kinova an-tranonkala ho an'ny Apple Music. Izany no antony tsy maintsy hampiasantsika ireo kinova tsy ofisialy toa ny Musish vaovao.
Foxconn hanapaka asa vonjimaika 50.000 XNUMX noho ny tsy fahombiazan'ny fivarotana iPhone
Ny orinasa sinoa fanta-daza dia hanala mpiasa 50.000 XNUMX eo ho eo amin'ny fifanarahana vonjimaika noho ny faharatsian'ny isa amin'ny iPhone
Ny iPhone XI Max dia hanana bateria 4000 mAh sy efijery 120 Hz
Vaovao vaovao no navoaka momba ilay heverina ho iPhone XI Max izay hanana bateria lehibe kokoa, fakantsary telo ary famahana haingana 15W.
Ny lehibe amin'ny indostrian'ny sarimihetsika, ankoatr'i Apple, dia miady ho an'ny serivisitr'i JJ Abrams
Ny orinasam-pamokarana JJ Abrams Bad Robot no tanjon'ny faniriana isaky ny Hollywood lehibe ankehitriny, anisan'izany i Apple.
Manampy ny fiasa ny TV Time ary manova ny fisehony amin'ny fanavaozana farany
Nahazo fanavaozana vao haingana ny TV Time izay manampy ny fampiharana ary manova kely ny endrika amina iOS.
Louis Vuitton handefa headphones mampihomehy amin'ny € 700
Louis Vuitton dia nanapa-kevitra ny handefa mpifaninana AirPods sasany miaraka amin'ny vidiny sy ny endriny mampihomehy indrindra ho an'izay atolotray.
Nike dia mandefa ny Adapt BB, kiraro izay mifandray amin'ny iPhone sy ny kofehiny
Mahatadidy ireo kiraro angano avy Back to the Future, Nike nandefa sneakers marani-tsaina izay mamatotra ny tenany ary mifandray amin'ny iPhone.
Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny ING fa hanana Apple Pay tsy ho ela
Rehefa niandry ela dia nahazo ny vaovao ny mpanjifa ING fa hifanaraka amin'ny karany tsy ho ela ny Apple Pay
Ny iPhone XS Max dia mamela ny ho avy Galaxy S10 + ho avy araka ny Benchmarks
Araka ny fampahalalana voalohany, ny iPhone XS Max dia hanolotra fahombiazana tsara sy hery lehibe kokoa noho ny Galaxy S10 + ho avy.
FANORENANA: Ny Smart Battery Case dia manana fahaiza-manao betsaka kokoa noho ny teo aloha
Apple dia manao azy indray, ny Smart Battery Case vaovao dia manana bateria kely kokoa noho ny fanontana taloha ny vokatra.
Apple dia nanameloka handoa $ 440 tapitrisa amin'ny troll patent
Hitan'i Apple ny fomba namoahan'ny troll patanty vola efa ho 500 tapitrisa dolara indray, tao anatin'ny fitoriana izay naharitra efa ho 8 taona.
Apple dia hanomboka ny fifanarahana miaraka amin'ny orinasam-pamokarana A24 miaraka amin'ny sarimihetsika Sofia Coppola sy Bill Murray
Apple dia manome ny tsy ampoizina amin'ny filazany fa ny horonantsariny voalohany miaraka amin'ny orinasa mpamokatra indie A24 no horonantsary manaraka nataon'i Sofia Coppola miaraka amin'i Bill Murray.
Lahatsary: ​​mety ho iPhone manaraka an'ny Apple ity: ny iPhone XI
Ity ny hevitra voalohany amin'ny iPhone XI. Ny fakantsary dia hanana fakantsary telo ao aoriana ary misy fihenam-bidy eo aloha.
Netflix dia manomana ny fiakarana vidiny lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra
Any Etazonia dia hampiakatra hatramin'ny 20% ny tahan'ny Netflix, zavatra mety ho tonga any Espana atsy ho atsy.
DuckDuckGo dia hampiasa ny Apple Maps ho an'ny fikarohana feno
Ankehitriny DuckDuckGo dia hampiditra ny Apple Maps ho motera fitadiavana toerana, fiaraha-miasa mahaliana ho an'ny fiainana manokana.
Podcast 10 × 15: miresaka momba ny iPhone XI
Ny iPhone XI vaovao dia efa manomboka ny mpandray ny vaovao momba ny haitao miaraka amin'ny tsaho momba ny endriny sy ny endriny.
Apple dia mandefa tranga Smart Battery vaovao ho an'ny iPhone XS, XS Max ary XR
Apple dia efa nandefa ny Smart Battery Case ho an'ny iPhone XS, iPhone XS Max ary mazava ho azy ny iPhone XR miaraka amin'ny vidiny adala.
Nofoanan'ny fitsarana Mannheim ny fitoriana an'i Qualcomm tamin'i Apple
Sambany tamin'ny ady ara-dalàna nifanaovan'i Apple sy Qualcomm tany Alemana, nanaiky an'i Apple ny fitsarana ary nanala ny fitoriana an'i Qualcomm.
Notsapainay ny kojakoja TENC Air sy Xkin 3D an'ny Just Mobile ho an'ny iPhone XR
Notsapainay izay vaovao avy amin'ny tovolahy ao amin'ny Just Mobile: ny tranga vaovao TENC Air mazava sy ilay mpiaro ny efijery Xkin 3D ho an'ny iPhone XR vaovao.
Namotopototra i Norvezy raha toa ka nanadino ny isany i Tidal nandritra ny volana maro
Saron'ny zava-miafina foana i Tidal, izao dia mandinika i Norvezy raha manadino ny fomba fijeriny sy ny angon-drakitry ny mpampiasa i Tidal.
Fanavaozana ny Instagram hanamboarana ny famahana ny iPhone XR sy XS Max
Ny fanavaozana farany ny Instagram dia mampifanaraka ny atiny amin'ny efijery an'ny iPhone XR sy iPhone XS bebe kokoa taorian'ny fanavaozana maro.
Apple dia nanolo batery iPhone 11 tapitrisa tamin'ny taona 2018
Ny programa fanoloana batterie iPhone, natolotry ny Apple ho an'ny rehetra tamin'ny vidiny 2018 euro tamin'ny 29, dia nampiasain'ny mpampiasa 11 tapitrisa.
Hidina any Shina ny zoma 18 janoary ho avy izao ny HomePod
Nahazo ny HomePod, mpandahateny marani-tsaina an'i Apple i Shina sy Hong Kong, izay hamely ny fivarotan'izy ireo ny zoma 18 janoary.
Namidiny ny voany mba hividianana iPhone, ankehitriny dia miaina mifandray amin'ny masinina izy
Ankehitriny ilay tovolahy sinoa nivarotra voa hividy iPhone dia kilemaina ary miraikitra amin'ny masinina dialyzy.
Amazon dia mijery anao mivantana amin'ny alàlan'ny vokatra Ring
Toa ny Ring (an'ny Amazon) dia mamela ny mpiasan'izy ireo hiditra amin'ny fampielezam-peo mivantana amin'ny fakan-tsarin'ny mpanjifany.
Ho avy tsy ho ela ny AirPower aorian'ny famokarana betsaka
Apple dia afaka nanomboka ny famokarana betsaka ny base wireless wireless antsoina hoe AirPower avy any Luxshare sy Pegatron.
Ireo no antony hitiavanao ny WiFi 6 amin'ny iPhone vaovao
Mijanona aminay ary fantaro ny antony maha-zava-dehibe ny WiFi 6 ary fantaro ny tombony azo alohan'ny fampisehoana ny iPhone an'ny 2019.
Apple Music dia namoaka fohifohy momba ny fomba nahatonga an'i Rami Malek ho Freddie Mercury ho an'ny Bohemian Rhapsody
Apple Music irery no mandahatra ny fanadihadiana fohy momba ny dingan'ny fandikana an'i Rami Malek ho Freddie Mercury ho an'ny Bohemian Rhapsody.
Ny iPhone 2019 dia mety hanana 'notch' kely noho ny AMS
AMS dia namolavola sensor infrared vaovao ahafahantsika manao veloma ny notch an'ny iPhone X satria mamela azy io hiasa eo ambanin'ny efijery OLED.
Apple hanolotra takelaka fahatsiarovana ny polisy Koreana mba hisaorana ny ady amin'ny vokatra sandoka
Ry zalahy Cupertino hanolotra plaka amin'ireo polisy koreana naka an-keriny ny kojakoja Apple sandoka $ 900.000
Ny Steve Jobs Theatre dia hampiantrano ny fivorian'ny tompon-tany isan-taona amin'ny 1 martsa
Ikea handefa blinds sy ambainy marani-tsaina amin'ny HomeKit amin'ny volana feb
Ity CES 2019 ity dia mahaliana amin'ny resaka automatisation an-trano sy ny fampidirana ao an-trano, ny vaovao fa ny ...
Ho tonga amin'ity taona 2019 ity ny serivisy fahitalavitra Apple
Misy dikany avokoa ny zava-drehetra raha mahatsapa ny mazava ho azy isika, Apple dia handefa ny serivisy fahitalavitra mivantana mandritra ny taona 2019 izay notarihan'ny tale jeneraliny.
Azo alaina any Espana izao afaka mitady hira amin'ny alàlan'ny tononkiran'izy ireo ao amin'ny Apple Music
Espaniôla dia efa ao amin'ny lisitry ny firenena mifanaraka amin'ity asan'ny Apple Music vaovao ity izay mamela anao hikaroka hira amin'ny alàlan'ny tononkiran'izy ireo.
Ny famokarana iPhone dia hahena 10% amin'ity telovolana ity
OtterBox dia manatevin-daharana ny Gorilla Glass ho an'ireo mpiaro ny efijery manaraka
Gaga ry zalahy avy amin'ny Otterbox tamin'ny fiarahany niasa tamin'ny Gorilla Glass hanangana Amplify, mpiaro ny efijery vaovao ho an'ny iPhone sy iPad.
Ny tranga mangarahara amin'ny 45 € sy ny vidin'ny Apple tsy misy dikany hafa
Miditra amin'ny Apple Store ianao ary tsy taitra amin'ireo latabatra hazo tena tsara tarehy, voalamina ary ...
Belkin Ankehitriny dia manolotra MFi Certified USB-C mankany amin'ny tariby manjelanjelatra
Ankehitriny Belkin dia namoaka tariby USB-C to Lightning misy fitaovana henjana sy fanamarinana MFi izay mahatonga azy io ho tariby akaiky indrindra.
Google Assistant dia ho avy tsy ho ela ao amin'ny Google Maps ho an'ny iOS
Google dia nanambara fa tsy ho ela ny Google Maps dia hampiditra ny mpanampy azy amin'ny Google Assistant hanamorana ny diantsika.
Satechi dia mandefa ny lozisialy vaovao hamelezana fitaovana marobe amin'ny fotoana iray
Ireo charger Satechi vaovao roa naseho tao amin'ny CES 2019 dia mamela ireo fitaovana marobe misy seranan-tsambo USB-C sy USB-A ho voampanga miaraka.
Ny sasany amin'ireo sensor ID Face dia mety hafenina ao ambadiky ny efijery
Ny iPhone X, XS, XS Max ary XR vaovao dia manana endrika iraisana izay miavaka, ambonin'izany rehetra izany, ...
Apple dia mety miaina ankivy "tsy ara-potoana" any Shina sy India
Raha ny filazan'ny mpandinika Bank of America maromaro, Apple dia mety hijaly noho ny fanaovana ankivy ataon'ny mpanjifa sinoa noho ny fifanenjanana eo amin'ny firenena roa tonta.
LaMetric dia manolotra SKY ary mahavariana
LaMetric SKY dia tontonana LED misy triangles 32 izay ahafahanao manamboatra rakipeo, mampiseho fampahalalana ary mifanaraka amin'ny HomeKit.
Ny iPhone XR no iPhone be mpividy indrindra tamin'ny Novambra, na dia 20% aza ny varotra isan-taona
Ny iPhone XR dia nanjary fitaovana fivarotana be indrindra an'i Apple nandritra ny volana Novambra 2018
Ring dia mandefa intercom video hafa ary tsy hita indray ny HomeKit
Ring dia namoaka ny Door View Cam, tambajotram-pifandraisana vaovao nohatsaraina, miaraka amin'ny tsara indrindra amin'ny marika fa tsy manana HomeKit indray.
LG koa dia mifandray tanana amin'ny AirPlay 2 sy HomeKit amin'ny vokatra vokariny
LG dia nanambara fa ny fahitalavitra rehetra dia ho AirPlay sy HomeKit mifanaraka mandritra ny CES 2019.
Samsung koa dia mijaly amin'ny fidinan'ny fidiram-bola ary "manome tsiny" an'i Sina ihany koa
Vao avy nanambara ny fihenan'ny fidiram-bola i Samsung, ary hita fa mendrika hanaraka ny paikadin'i Tim Cook ary hanome tsiny an'i Sina noho io fianjerana io.
Apple Store kely indrindra any Japon hikatona mandrakizay aorian'ny fisokafan'ny 13 taona
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manapa-kevitra hanidy ny Apple Store kely indrindra ary iray amin'ireo tranainy indrindra any Japon, ny Sendai Apple Store.
Nivarotra fitaovana maherin'ny 100 tapitrisa Alexa
Ireo mpandahateny an'i Echo an'ny Amazon izay tantanan'ny Alexa dia nihoatra ny 100 tapitrisa unit namidy.
Podcast 10 × 14: Miresaka momba ny apokalipsy isika
Ao amin'ny podcast amin'ity herinandro ity isika dia miresaka momba ny fianjeran'i Apple. Hevitra sy fanadihadiana momba izay mety ho vaovao amin'ny taona amin'ny haitao
Bang & Olufsen manavao ny Beoplay E8 amin'ny fampidirana ny famandrihana tsy misy tariby
Ny taranaka faharoa an'ny Bang Olufsen Beoplay E8 dia manome antsika tranga tsy misy fangarony tariby ho zava-baovao.
Maty tamin'ny fahombiazana ve i Apple sa namono azy io ny politikany momba ny vidiny?
Tena miatrika ny faran'ny Apple ve isika? Andeha hojerentsika ny zava-misy taorian'ny fianjeran'ny tsenan'ny stock Apple tamin'ny zava-kendrena kely.
Apple sy ireo mpiara-miasa aminy dia manavao ny fenitra USB-C vaovao miaraka amin'ny filaminana bebe kokoa
Apple dia manohy ny fahalianany amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny mpampiasa rehetra, amin'ny farany ny filaminana dia zavatra izay ...
Apple dia nisintona ny anjarany tamin'ny tsenambola alohan'ny nanambarana ny fihenan'ny andrasana ara-bola
Tsy mandeha amin'ny laoniny ny zavatra ao Apple ary ny fanamafisana mazava indrindra dia hita fa nesorin'ny orinasa ny vidin'ny anjaran'ny orinasa alohan'ny nampidinany ny andrasana ara-bola
Taom-baovao, vokatra vaovao?: Inona no miandry antsika amin'ny taona 2019?
Apple dia hanana herintaona feno fampidirana vokatra vaovao sy serivisy vaovao. Ho fanampin'izay, hanana tanjona ny hanatsara ny Siri sy Apple Music.
Ny Apple tsara indrindra tamin'ny taona 2018
Ity ny famintinana ny tsara indrindra natolotr'i Apple nandritra ity taona 2018 ity izay ahitanao ireo vokatra amin'ny vidiny tsara indrindra.
Apple dia hitondra ny famokarana iPhones avo lenta any India
Afaka naka ny famokarana iPhones avo lenta any India i Apple, hamaly ny fangatahan'ny governemanta ary hisorohana ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra any Chine.
IPhone XS Max nipoaka tao am-paosin'ny mpampiasa Ohio
Mpampiasa iray avy any Columbus any Ohio no nitatitra ny fipoahan'ny iPhone XS Max tao am-paosin'ny pataloha, ary tao amin'ny Apple Store dia tsy fantatr'izy ireo ny fomba hanampiana azy ...
Niverina tany amin'ny fitsarana i Apple, tamin'ity indray mitoraka ity ho an'ny feo hebreo Siri
Ilay vehivavy izay manome feo ny fiteny hebreo Siri dia nitory an'i Apple noho ny fiheverany fa "tsy ara-dalàna" ny fampiasan'izy ireo ny feony.
Color Flood, ilay fanambarana vaovao an'ny iPhone XR an'ny Apple
Apple dia namoaka doka vaovao hampiroborobo ny iPhone XR, mampiseho manokana voninkazo ho an'ny fisehoana Liquid Retina sy ny kalitaony.
Ny HomePod dia efa mahay mamaly 25% mihoatra ny amin'ny fiandohan'ny taona
Ny fivoaran'ny Siri amin'ny HomePod dia azo jerena noho ity fandalinana vaovao ity izay manome antoka fa mamaly ny 74% amin'ireo fanontaniana napetraka izy io.
Araka ny kaonty iray momba ireo orinasa mitantana tsara ny angon-drakitry ny mpampiasa, Tesla sy Netflix no orinasa azo antoka indrindra amin'izany.
Gaga ireo tovolahy avy ao Cupertino tamin'ny famoahana fananganana iOS 12.1.2 vaovao izay manamboatra bug kely ary misoroka ny famoahana iOS 12.1.3 vaovao.
Misy orinasa sasany any Shina manatevin-daharana ny ankivy amin'ny Apple
Ny Instagram dia namehy azy tamin'ny fanavaozana farany azy: very ny fanohanana ny iPhone XR sy XS
Ny fanavaozana ny Instagram vaovao dia nahatonga ny fampiharana ho hafahafa sy manjavozavo amin'ny iPhone XS sy XR noho ny fahaverezan'ny fanatsarana.
Fikarohana vaovao iray no nanambara fa ny App Store dia nampitombo avo roa heny ny isan'ny mpamorona ho 2018 tapitrisa $ raha oharina amin'ny Play Store amin'ny taona XNUMX.
Izay fitaovana misy an'i Alexa dia hifanaraka amin'ny Apple Music
Ny vaovao farany dia manondro fa Apple Music dia mety hitatra amin'ireo mpandahateny rehetra miaraka amin'i Alexa, ankoatry ny Amazon Echo.
Fahamendrehana vaovao: nanome alalana ny hafatrao tamin'ny orinasa toa ny Netflix na Spotify ny Facebook
Ora vitsy lasa izay dia navoaka fa ny Facebook dia namela orinasa sasany hiditra sy hanova ny hafatry ny mpampiasa.
Amin'ity sary mihetsika vaovao ity dia te hisoroka ny fanakanana ny Qualcomm any Shina i Apple
Apple dia manome antoka fa ny kinova farany an'ny iOS izay natombony andro vitsivitsy lasa izay, dia mamaha ny olan'ny fitsarana izay atrehiny miaraka amin'i Qualcomm
IPhones dia mety hanana ID ID tarehy sy Touch ID miaraka amin'izay
Miaraka amin'ny iPhone X, XS, XR ary XS Max vaovao, Apple dia nanazava fa ny maodely vaovao an'ny ...
Hodinihinay ny taona 2018 efa hifarana. Ny fandefasana vaovao, ny fanavaozana, ny tena nahagaga anay ary ny tsy.
Apple miantso ny fidirana Apple Music miaraka amin'ny Amazon Echo
Apple dia nampiroborobo ny fampiharana Amazon Alexa mba hahafantaran'ny mpamandrika Apple Music mahafantatra momba ny fampidirana amin'ny Amazon Echos.
Nafindran'i Apple ho any Pegatron ny famokarana iPhone mba hialana amin'ny fanakanana an'i Shina
Mba hanandramana hialana amin'ny fandrarana ny fivarotana iPhones any Shina, Apple dia mikasa ny hamindra ny famokarana ho an'ny mpanamboatra Pegatron.
Apple dia mahazo ny zon'ny Snoopy amin'ny serivisy fandefasana horonantsary ho avy
Miaraka amin'ny fahitana ny serivisy fandefasana horonantsary manaraka an'i Apple, tao Cupertino dia vao nahazo ny zon'ny andiany Snoopy sy Carlitos malaza izy ireo.
Ireo no teny miafina fampiasa indrindra amin'ny taona 2018
SplashData dia namoaka ny tatitra isan-taona izay hamakafaka ny teny miafina izay nampiasaina fatratra nandritra ny taona 2018.
PlayAppleMusic, mpilalao tranonkala Apple Music tena mahaliana
Nisy mpamorona iray namorona PlayAppleMusic. Mpilalao mozika Apple Music an-tserasera, loharano misokatra ary mikasa ny hanavao tsy ho ela.
Ming-Chi Kuo dia mampihena ny vina fivarotana iPhone azy hatramin'ny 20%
Hisy fanavaozam-baovao ho an'ny iOS any China izay hampiato ny fandrarana ny fivarotana iPhones
Jennifer Garner milalao andiany vaovao ho an'ny Apple notarihin'i JJ Abrams
Misaotra ireo andiany vaovao izay ho anisan'ny katalaogin'ny serivisy fandefasana horonantsary an'i Apple, hihaona indray i Jennifer Garner sy i JJ Abrams
Apple dia mety miasa amin'ny "Apple Music for Business"
Apple dia nanisy marika ny Apple Music for Business, izay mety ho serivisy hitendrena ny mozikanao ho an'ny mpihaino marobe.
Apple dia tsy te-hanatevin-daharana ny mpamaky ny rantsan-tànana eo amin'ny efijery na ny moka
Amin'ny fahatongavan'i Samsung Galaxy A8s dia hitantsika ny fanoloran-tenan'i Samsung amin'ny "freckle", izany no fandehako ...
Apple dia manolotra fihenam-bidy ho an'ny HomePod raha misoratra anarana amin'ny Apple Music ianao
Mpanoratra Apple Music ve ianao? Mety ho sambatra ianao! Appe dia manolotra fihenam-bidy mahaliana ho an'ny HomePod hankalazana ny fialantsasatra.
Voarara ny fivarotana iPhones ao Shina i Apple
Amin'ity herinandro ity isika dia miresaka momba ny fifandraisana misy tafio-drivotra eo amin'ireo orinasa teknolojia lehibe, izay mpinamana akaiky ankehitriny ary ao anatin'ny volana vitsivitsy izay fahavalo ankahalaina.
Apple Watch Series 4 dia mandrefy ny tahan'ny fitempon'ny fonao raha mikasika ny Digital Crown ianao
Araka ny vaovao farany, ny Apple Watch Series 4 dia manome fandrefesana feno kokoa sy haingana kokoa ny pulsations raha mikasika ny Digital Crown isika
Google Maps dia mandefa tabilao vaovao "ho anao"
Ny rafitra fitetezana sy ny sarintany Google dia mbola eo alohan'ilay natolotry ny Apple ho an'ny mpampiasa azy, ...
Apple Pay dia vonona any Alemana
Ny zava-drehetra dia manondro fa ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny Apple Pay any Alemana dia efa voaomana ary ora maromaro.
Apple mividy orinasa A&R izay mahita talenta mozika vaovao
Ny orinasa monina ao Cupertino dia nividy ny orinasa A&R Platoon, hahitana talenta mozika vaovao ho an'ny sehatry ny mozika mivantana.
Mpampiasa Apple Watch no namonjy ny ainy rehefa nahita ny fibrillation atrial izy noho ny ECG vaovao
Ny fiantraikan'ny ECG vaovao an'ny Apple Watch Series 4 amin'ny mpampiasa US dia manomboka fantatra: efa namonjy ain'olona ...
Manomboka mivarotra ny Beddit 3.5 Sleep Monitor vaovao i Apple
Ny FCC dia nanome ny jiro maitso ho an'ny vokatra vaovaon'i Beddit: ny Beddit 3.5 Sleep Monitor, izay nanomboka namidy tamin'ny tranokala ofisialin'i Apple.
Ny fiasa ECG vaovao an'ny Apple Watch dia efa manomboka mamonjy ain'olona
Ny mpampiasa Apple Watch dia mety namonjy ny ainy satria voan'ny Apple Watch fa voan'ny fibrillation atrial izy.
Apple dia manavao ny app WWDC hampifanaraka azy amin'ny iPad Pro vaovao
Apple dia nanapa-kevitra ny hanavao ny fampiharana natokana ho an'ny WWDC. Ity kinova ity dia nohamarinina ho an'ny iPad Pro vaovao ary misy fanatsarana kely.
Ny HomePod dia ho tonga any Chine amin'ny fiandohan'ny taona ho avy
Ny firenena manaraka izay hanjary ho misy ofisialy ny HomePod dia i Shina, ary hamidy izany amin'ny fiandohan'ny taona manaraka.
Raha latsaky ny 22 taona ianao dia tsy afaka mampiasa ny asan'ny ECG an'ny Apple Watch Series 4
Ny famoahana ny watchOS 5.1.2 dia nanambara fa ireo latsaky ny 22 taona dia tsy mahazo miditra amin'ny app ECG an'ny Apple Watch Series 4.
Fitaomana Beddit: Apple dia misoratra anarana 'monitor monitor' miaraka amin'ny FCC
Beddit dia azon'i Apple mihoatra ny herintaona lasa izay. Androany dia nanamafy tamin'i Apple ny fisoratana anarana hoe "tendrombohitra nofinofy" ny FCC.
iOS 12 dia misy amin'ny fitaovana 70 tohanana
3 volana aorian'ny famoahana azy dia hita ao amin'ny 12% amin'ny fitaovana rehetra tohanan'ny iOS 70.
Apple dia mandefa magazay manokana miaraka amin'ny fihenam-bidy ho an'ny miaramila sy ny veterana
Manaraka ny dian'ny Apple Store of Education, ny bandy Cupertino dia mandefa Apple Store ho an'ny miaramila amerikana sy ny veterana.
iHome mandefa vokatra vaovao mifanaraka amin'ny Alexa
Amin'ity tranga ity, ny orinasa iHome dia nitsambikina tamin'ny kalesy Alexa tamin'ny alàlan'ny fandefasana famantaranandro fanairana sy fitaratra makiazy.
Apple Music hiara-hiasa hanambara ireo voatendry Grammy
Ny loka mozika dia toerana tsara hijerena mivantana ny tsara indrindra amin'ny mpanakanto tsirairay, mitranga izany aorian'ny taona ...
Apple Music hanambarana manokana ireo voatendry Grammy 2018
Apple Music dia hanambara ireo voatendry hanana sokajy mihoatra ny 60 amin'ny Grammys 2018, loka mozika malaza.
Arlo dia mampahafantatra fakantsary fanaraha-maso 4K amin'ny HDR
Amin'ity indray mitoraka ity dia te hampifaly antsika i Arlo amin'ny fanombohana fakantsary fanaraha-maso misy rakipeo 4K sy teknolojia HDR.
Apple dia manohana hatrany ny fampielezan-kevitra momba ny SIDA
Tamin'ny andro iraisam-pirenena nanohitra ny SIDA tamin'ny 1 Desambra, nolokoin'ny orinasa Cupertino indray ...
Apollo for Reddit manavao ny ampahan'ny interface aminy ary mandefa vaovao mahaliana
Apollo dia rindrambaiko ahafahantsika mijery ny kaonty Reddit anay. Nohavaozina amin'ny kinova 1.4 miaraka amin'ny vaovao mahaliana izy io.
Ho avy tsy ho ela ny adin'ny mpilalao Pokémon GO
Niantic dia nampiasa ny kaonty Twitter-ny hanambarana fa tsy ho ela dia ho hitantsika ny fomba ady amin'ny PVP eo amin'ny samy mpilalao ao amin'ny Pokémon GO.
Apple dia mandefa toerana fanaovana fampielezana vaovao 'Shot on iPhone' miaraka amin'i Decotoras Japoney malaza
Manohy ny fampielezan-kevitra Shot amin'ny iPhone ry zalahy Cupertino miaraka amin'ny horonan-tsary iray misy an'i Lady Misaki, decotora japoney malaza.
Nanangona $ 200 tapitrisa i Apple tamin'ny alàlan'ny varotra RED (PRODUCT) hiadiana amin'ny SIDA
Hatramin'ny nanombohan'i Apple nandray anjara tamin'ny RED Global Fund hiadiana amin'ny SIDA, ny orinasa Tim Cook dia nanangona $ 200 tapitrisa mahery.
Apple dia mbola liana te hanana anjara amin'ny iHeartMedia
Apple dia te-hampiasa vola amin'ny iHeartMedia mba hanitarana ny isan'ny mpampiasa Apple Music any Etazonia
Apple dia notoriana noho ny fampiasana sivana vovoka amin'ny Macs
Ny tsy fisian'ny sivana vovoka ao amin'ny iMac sy MacBook dia nahatonga an'i Apple ho any amin'ny fitsarana noho ny fitoriana napetrak'ireo mpampiasa amerikana.
Qualcomm dia manakaiky ny fifanarahana fifanarahana amin'i Apple
Anio isika, ka tsy manan-tsafidy afa-tsy ny hitantara ny toko manaraka amin'ilay tantara maharikoriko isika ...
Ny app Spotlight dia havaozina mba hifangaro amin'ny iPad Pro vaovao
iOS dia mitombo tsy mitsaha-mitombo, hany ka tamin'ny farany dia nisy zavatra nitranga izay tsy azontsika inoana, ...
Belzika dia efa manana fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka amin'ny alàlan'ny Apple Maps
Ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka amin'ny Apple Maps dia nanomboka nisy ihany koa tany Belzika.
Podcast 10 × 11: Solosaina sa Tablet?
Amin'ity herinandro ity isika dia miresaka momba ny adihevitra momba ny takelaka raha mety ho solosaina, na raha tsy soloina iPad mihitsy ny solosaina finday.
Ny tahan'ny fananganana iOS 12 dia mitombo hatrany, miakatra amin'ny 70%
Maherin'ny 70% amin'ireo fitaovana no efa nametraka ny iOS 12. Ity tahan'ny fananganana ity dia mihoatra ny isa sy ny fetr'andro natokana ho an'ny iOS 11.
Fampisehoana ôfisialy Apple Pay any Belzika
Belzika izao dia firenena iray hafa izay manomboka miparitaka amin'ny fomba ofisialy ny Apple Pay.
iCloud ho an'ny Windows dia manavao sy manamboatra lesoka
Apple sy Microsoft dia nanambara fa miasa amina vahaolana izay ho avy tsy ho ela izy ireo. Ankehitriny Apple dia namoaka fanavaozana ny iCloud ho an'ny Windows izay mamaha ny olana.
Mampianatra mpianatra mpianatra marobe mandritra ny herinandro fanabeazana momba ny siansa momba ny informatika i Apple
Apple dia mampitombo ny vola atolotra azy hanavao ny iPhone taloha ho an'ny iray vaovao, any Etazonia ihany izao
Ao anatin'ny hetsika manamarina fa ny fivarotana iPhone dia tsy mitovy amin'ny taona lasa, Apple dia te hamporisika ny fivarotana iPhones vaovao, hampitombo ny vola omena azy hanaterana fitaovana taloha.
Animoji an'i Apple dia hisy vokany amin'ny feo mifototra amin'ny fihetsika
Ankehitriny ny Animoji dia hamela anao hanisy fiatraikany amin'ny toetranao mifototra amin'ny fanehoana ny endrikay.
Niala tsiny i Samsung fa nahatonga homamiadana ho an'ireo mpiasan'ny ozininy
Samsung dia hanohy ny onitra hatramin'ny 116.000 Euros amin'ireo mpiasa ao aminy ao amin'ireo ozinina izay mety voan'ny homamiadana noho io antony io.
Apple dia manamafy ny fanohanan'ireo vehivavy mpandraharaha ao amin'ny Camp-ny
Ny fahirano an'i Apple dia manakana ny fitomboan'ny Stickers for WhatsApp
Indray mandeha indray, ny fifehezan'i Apple ny App Store dia manakana ny famoahana stiker vaovao ho an'ny WhatsApp.
Apple dia te-hanatsara ny tsindry bokotra na dia amin'ny tranga iray aza
Apple dia te handray an-tsaina fa ny mpampiasa dia mazàna mampiasa tranga fiarovana ary te hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa rehefa manindry bokotra.
Ny maha-zava-dehibe ny firotsahan'i Apple amin'ny olan'ny fahasalamana
Ny famoahana ho an'ny fiarahamonin'ny Apple Health Records API dia nahitana fanatsarana ny fitantanana ny fahasalaman'ny olona maro any Etazonia.
Ny tabilao hover tsara indrindra hifandraisana mivantana amin'ny iPhone-nao
Mijanona aminay ary fantaro izay hoverboard mahaliana indrindra hifandray mivantana amin'ny iPhone amin'ny fomba mora.
Mahita sary mahatalanjona sy sinema izay nalaina niaraka tamin'ny iPhone XS Max
Asehonay ireo sary nalain'ny mpanao cinematographer niaraka tamin'ny iPhone XS Max sy iray amin'ireo stabilisatera tsara indrindra eny an-tsena.
Apple dia mandefa ny zoma mainty miaraka amin'ny Apple Shopping Days manokana
Apple dia mandefa ny tolotra Black Friday mandritra ity faran'ny herinandro ity hahafahantsika mahazo karatra fanomezana amin'ny alàlan'ny fividianana ireo vokatra fampiroboroboana.
Apple dia nahazo ny loka fanandevozana noho ny toe-piainana tsara
Angela Ahrendts dia naka ny loka Slavery Award tany London ary nanambara fa hampiditra vehivavy izay nohararaotina tamin'ny fivarotana izy ireo.
Izahay dia mamakafaka ireo safidy samihafa atolotry ny mpandahateny maranitra ho anay: Apple miaraka amin'i Siri, Amazon miaraka amin'i Alexa ary Google miaraka amin'ny Google Assistant.
MeasureKit - AR te hifaninana amin'ny fampiharana Apple's Measurements
MeasureKit - AR tonga hiatrika ny Apple Fandrefesana miaraka amina fiasa bebe kokoa sy fiasa bebe kokoa manararaotra ny Augmented Reality of iOS.
Midina amin'ny iPad ny efitrano maizimaizina miaraka amin'ny vanim-potoana beta
Bergen Co, mpamorona ny Darkroom, dia nanapa-kevitra tamin'ny fahatongavan'ny iPad Pro vaovao hanangana ny fampiharana amin'ny efijery lehibe miaraka amin'ny vanim-potoana beta.
Apple dia mampihena ny fanamboarana iPhones rehetra noho ny tsy fahampian'ny fangatahana
Raha ny filazan'ireo manam-pahaizana manokana dia nampihena be ny famokarana iPhones i Apple satria nanamafy ny fangatahana izany.
Ny marika nentim-paharazana dia miloka amin'ny Smartwatch
Mipoitra ankehitriny ireo mpifanandrina matotra eo amin'ny tsena nanjakan'ny Apple Watch, nandefa famantaranandro marani-tsaina ihany koa ireo marika nentin-drazana.
Apple dia nanambara ny varotra efatra andro ho an'ny Black Friday
Amin'ity taona ity Apple dia manomana fivarotana sy tolotra efatra andro hividianana ny vokatrao amin'ny vidiny tsara indrindra, zavatra nahagaga antsika.
Niady tamin'ny vaovao sandoka ireo mpampanonta Apple News
Tompon'antoka amin'ny fanivanana ireo vaovao miseho amin'ny fampiharana hisorohana ny fanaparitahana vaovao sandoka ireo tonian-dahatsoron'ny Apple News any Aostralia.
Insignia dia mandefa rafitra varavarana garazy marani-tsaina amin'ny HomeKit
Toy izao no anoloran'i Insignia vokatra vaovao hitantanana ny fisokafan'ny varavaran'ny garazy misy anay miaraka amin'ny fampidirana HomeKit.
Microsoft sy Apple dia efa manandrana mamaha ny olan'ny iCloud ao amin'ny Windows
Ary farany dia toa efa vita ny ady ary nifandray tanana tamin'i Microsoft i Apple mba hanandramana hamaha ireo olana goavambe izay ananan'ny iCloud ao amin'ny Windows.
Niantic namoaka ny tranofiara ho an'i Harry Potter: Wizards Unite, ilay lalao vaovao nampitomboina
Niantic dia namoaka ny tranofiara ho an'ny lalao vaovao nampitomboina izay havoaka amin'ny 2019. Harry Potter: Wizards Unite.
Ny fividianana an'i Finisar dia nikatona tamin'ny vidiny 332 tapitrisa euro
Ny fividianana an'i Finisar dia nikatona tamin'ny vidiny 332 tapitrisa dolara
Mampidina ny tombam-bidin'izy ireo ny mpivarotra IPhone
Apple dia mampihena ny baikon'ny singa ao amin'ny iPhone amin'ireo mpamatsy samihafa, izay manambara ny fihenan'ny vinan'ny fidiram-bola.
Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fividianana Netatmo i Legrand
Sonos dia mandefa Alexa amin'ny fitaovana rehetra amin'ny teny Espaniola
Mijanona aminay hahitanao izay vaovao natolotr'i Sonos niaraka tamin'ny fanampian'ny Alexa hanamora ny fiainanao.
Apple dia manakarama orinasa mpamokatra indie A24 tompon'andraikitra amin'ny sarimihetsika Moonlight sy Ex Machina
Gaga ireo tovolahy avy any Cupertino ary nanakarama ilay mpamokatra A24 mpandresy, ary mihoatra ny mahaliana, mpamokatra AXNUMX miaraka amina tetik'asa momba ny sarimihetsika ho avy.
Apple dia manaraka an'i Qualcomm, ankehitriny dia "mangalatra" ny mpiasa
Apple dia miady amin'ny Qualcomm ary «mangalatra» ireo injenierany hanamboarany processeur azy manokana.
Netflix dia mikasa ny hisoratra anarana amin'ny finday ihany
Netflix koa dia te handray an-tsaina an'io tsena io ary mikasa ny handefa fisoratana anarana mora vidy kokoa raha hijery avy amin'ny finday.
Ny hoavin'ny efijery: Infinity Flex, tontonana Samsung izay mivalona
Samsung dia nanolotra ny fitaovana voalohany miaraka amin'ny teknolojia Infinity Flex Display. Izany hoe efijery mivalona ary miasa.
Ny anjaran'i Apple dia mbola mitohy hatrany aorian'ny fivontosana mafy
Nike dia handefa tady Apple Watch vaovao telo amin'ity herinandro ity
Nike dia mbola milamina miaraka amin'ireo tovolahy avy any Cupertino ary handefa fatorana telo vaovao ho an'ny Apple Watch amin'ity herinandro ity, taratra ny roa amin'izany.
Volkswagen dia miomana hampiditra ny Siri Shortcuts amin'ny fiarany
Volkswagen dia mijanona ho lohalaharana indrindra amin'ny resaka CarPlay ary hanolotra hitsin-dàlana Siri hitantanana asa samihafa.
Ny ID Apple sasany dia mihidy tsy hay hazavaina
Ny tsy fahombiazan'ny mpizara Apple dia mahatonga ny mpampiasa Apple maro eran'izao tontolo izao mitatitra olana sy fianjerana amin'ireo ID Apple.
Ankehitriny Telegram dia nandefa fonosana sticker azy manokana ho an'ny WhatsApp ary azonao atao ny misintona azy ireo maimaim-poana.
Apple dia afaka nampiasa rafitra antena hybrid amin'ny taona 2019
Nilaza ny mpandinika fa hampiasa rafitra antena hybrid vaovao amin'ny iPhones 2019 ny orinasa Cupertino.
Amin'ny toe-tsaina manohy manatsara ny Apple Watch Series 4 vaovao, Apple dia manomana ny fahatongavan'i Walkie Talkie mankany amin'ny Control Center miaraka amin'ny watchOS 5.1.2
Ny iPhone XR dia manohitra ny fividianana azy eo imason'ny rahalahiny
Ny angona farany nomen'i John Vinh, dia manome antoka fa manangona lisitra 3 andro amin'ny iPhone XR ireo magazay, izay tsy dia lafo.